I-KoMe Beach House - I-Airbnb
I-KoMe Beach House
Jambiani, Zanzibar Central/South, i-Tanzania
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Iddi
U-Iddi Ungumbungazi ovelele
Indlu yasebhishi i-KoMe etholakala e-Jambiani, elinye lamabhishi amahle kakhulu esiqhingini, elinamamayela esihlabathi esimhlophe esijulile. Kwa-KoMe awusoze wazizwa unesizungu njengoba kunezindawo zokudlela eziningi namabha eduze; njenge-Coral Rock 2 imizuzu yokuhamba, i-Kimte ne-Art Hotel emakhoneni, inkawu ebomvu cishe imizuzu engu-4 yokuhamba, lezi yizindawo lapho ungahlangana khona nabanye abantu basentshonalanga. I-Kome ifanele imindeni nemibhangqwana efuna ukuchitha iholide endaweni ethule futhi ephumuzayo.
Indlu yase-Kome Beach inamakamelo okulala ayi-2, amagumbi okugeza angu-2 negumbi lokuhlala elikhulu, ikhishi elinakho konke ukunethezeka, eliqondiswe ogwini lolwandle oluhle olunesihlabathi esimhlophe. Izivakashi zethu zikhululekile ukusebenzisa yonke indawo yendlu futhi ulwazi olwengeziwe luzonikezwa ngesikhathi sokufika kwakho. I-Jambiani idume ngamagagasi nemibala yayo edlalwa ulwandle ngamahora ahlukene osuku, indawo enokuthula nephumulele eyenza kube iholide eliyingqayizivele nelingenakulibaleka. I-Kome iyindawo engcono kakhulu yabatshuzi be-Kite kodwa futhi nokuqeqeshwa kunganikezwa eziNkawuni Ezibomvu (uhambo lwemizuzu emi-4) lapho benesikole sabo sokuntweza kite-surfing.
4.75 · 170 okushiwo abanye
Ithimba labaphathi alikwazi nje ukusiza lapho kudingeka: ukuyothenga, ukudla noma ukukuyisa ezindaweni zokuvakasha ezahlukene (i-spice tour, i-blue safari, i-Stone Town, ihlathi laseJozani, amahlengethwa, ukuhamba ngomkhumbi) kodwa futhi lingahlela noma yiluphi uhlobo lokudla (okuhlanganisa nokupheka, isevisi yetafula, ibhulakufesi).
Indlu yasebhishi i-KoMe etholakala e-Jambiani, elinye lamabhishi amahle kakhulu esiqhingini, elinamamayela esihlabathi esimhlophe esijulile. Kwa-KoMe awusoze wazizwa unesizungu njengoba kunezindawo zokudlela eziningi namabha eduze; njenge-Coral Rock 2 imizuzu yokuhamba, i-Kimte ne-Art Hotel ezungeze amakhona, inkawu ebomvu mayelana nokuhamba okungu-4, lezi yizindawo lapho ungahlangana khona nabanye abantu basentshonalanga.
Indlu yasebhishi i-KoMe etholakala e-Jambiani, elinye lamabhishi amahle kakhulu esiqhingini, elinamamayela esihlabathi esimhlophe esijulile. Kwa-KoMe awusoze wazizwa unesizungu nje…
UIddi Ungumbungazi ovelele